Soo dejisan Pale Moon 28.8.2.1 Stable iyo Portable – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaPale Moon
Bogga rasmiga ah: Pale Moon
Cirro Moon – browser ah diiradda saaray koror xawaaraha iyo hawlgal deggan internet-ka. feature ugu weyn ee software-ka waa in la isticmaalo ugu ah qaababka Firefox iyo qalab. Cirro Moon bixisaa qaab horumar weyn by naafada sifooyinka gaarka ah ee browser caanka ah. software The u saamaxaaya in ay kala duwan ee goobaha, bookmarks iyo kordhin ugu wareejiyo ka browser Firefox ah. Cirro Moon ayaa interface ah dareen leh oo gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar.
xawaaraha processing Sare
La jaan qaada goobaha Firefox ugu
Soo dejisan Pale Moon
Faallo ku saabsan Pale Moon
Pale Moon Xirfadaha la xiriira